गृहपृष्ठ » मुख्य समाचारहरु » अबको महामारी कोभिड सङ्कटभन्दा निकै घातक हुने विज्ञको चेतावनी
काठमाडौं । भविष्यका महामारी कोभिड सङ्कटभन्दा निकै घातक हुनसक्ने अक्सफर्ड-आस्ट्राजेनेका खोपका एक विकासकर्ताले चेतावनी दिएकी छन्। प्राध्यापक डेम सारा गिलबर्टले एउटा मन्तव्यका क्रममा महामारीसँग जुझ्ने तयारीका लागि अझ धेरै पैसा आवश्यक पर्ने बताइन्। उनले ओमिक्रोन भेरिअन्टका लागि खोपहरू कम प्रभावकारी हुनसक्ने समेत चेतावनी दिइन्।
उनले यसबारे थप थाहा नहुँदासम्म मानिसहरू सजग हुनुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, “भाइरसले हाम्रो जीवन र जीविकालाई त्रासमा पारेको यो अन्तिम पटक हुने छैन। सत्य के हो भने अर्को निकै खराब हुनसक्छ। त्यो निकै सङ्क्रामक र घातक वा दुवै हुनसक्छ।”
उनले त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिनका लागि अझै पर्याप्त आर्थिक आधार सहितको तयारी नगरिएको बताइन्। “हामीले विकास गरेका क्षमता र ज्ञान खेर जानु हुँदैन।” ओमिक्रोन भेरिअन्टबारे बोल्दै उनले उत्परिवर्तन भएका स्पाइक प्रोटिनले त्यसको सङ्क्रामक क्षमता उच्च भएको देखाउने बताइन्।
“तर त्यहाँ थप परिवर्तनहरू भएका छन् जसको अर्थ खोप वा अन्य भेरिअन्टले विकास गरेको प्रतिरोधी तत्त्व ओमिक्रोनबाट बच्न कम प्रभावकारी हुनसक्छ।”यद्यपि उनले सङ्क्रमण विरुद्धको घट्दो संरक्षण र मध्यम खाले रोगको अर्थ गम्भीर रोग र मृत्युबाट पनि खोपले नबचाउने भन्ने चाहिँ भइनहाल्ने बताइन्।
उनले महामारीका बेला छिट्टै खोप र औषधिहरू बनेको प्रगतिलाई एउटा मापदण्डका रूपमा राख्नुपर्ने बताइन्। उनले फ्लुको जोखिमलाई हटाउन विश्वले एउटै खोप विकास गर्न नसक्नुको कुनै कारण नभएको पनि बताइन्।
अफगानिस्तानमा गएको भूकम्पमा परी कम्तीमा १२ जनाको मृत्यु
अबुधाबी ड्रोन हमला : दुई भारतीयसहित ३ जनाको मृत्यु, ६ जना घाइते
प्रधानसेनापति सहित १३ जनाको मृत्यु भएको हेलिकप्टर दुर्घटनाको कारण पत्ता लाग्यो
बलिउडमा अर्को ठूलो शोक : शनिबार ज्वरो आयो सोमबार कोरोनाबाट इब्राहिमको निधन
मोबाइल हेर्दै बाटो काट्दा क्रेनको ठक्करबाट कुवेतमा नेपाली महिलाको मृत्यु
दुनियाँको मनमा बसेकी चर्चित बघिनीको मृत्युले स्तब्ध, एकैपटक ५ बच्चा जन्माउथीन्
भारतमा २४ घण्टामै थपिए साढे २ लाख कोरोना संक्रमित, ओमिक्रोन संक्रमित ह्वात्तै बढे
विवाहित भएर अरुसँग सम्बन्ध राख्ने महिलालाई समाजका अगाडी १०० कोर्रा, पुरुषलाई १५ कोर्रा
चीनसँग लड्न ताइवानका सैनिकहरू हिउँको आँधीमा कडा अभ्यास गरिरहेको भिडियो बाहिरिएपछि…
पानीमुनि शक्तिशाली ज्वालामुखी ब्लाष्ट, भूउपग्रहले खिचेका यी तस्विर हेर्दा दुनियाँ हैरान
संसद र सरकारमा चिनियाँ दलालहरू सक्रिय रहेको गम्भीर खुलासा, देश निकाला गर्न सिफारिश !
राजधानीमा भर्खरै शक्तिशाली भूकम्प, कस्तो छ इन्डोनेसियाको अवस्था ?
न्यूजिल्याण्डमा भयानक ज्वालामुखी विष्फोट, सुनामीको चेतावनी
करोड भन्दा धेरै रकम दिँदा पनि चुनावमा टिकट नपाएपछि धुरुधुरु रोए नेता (भिडियोसहित)